Xog Iyo Xaqiiq Xasaasiya; Qaabkii Uu u Qabsoomay Imtixaankii Saaka Laga Qaaday Ardaydii Shaqo Qaran! – Xeernews24
31. Juli 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Saaka Oo Salaaasa ah , Taariikhduna ay tahay 30 july, 2019 , goor ay amin sheegtu tilmaamayso 7:00 am ayaanu tagnay aniga iyo xubno ka tirsan Gudida shaqo qaran maroodi jeex goobtu lagu balan sanaa in imtixaanka lagu qaado( jaamacada hargeysa) shaqadayda ugu muhiimsani waxa ay ahayd hubinta habsami u socodka imtixaanka loo galayo Shirkada Singpore New Silk Somaliland Energy Company ( SNSS) maadama aanu matalno dhaman dhalinyarta shaqo qaran Maroodijeex sidoo kale ay marti noo ahaayeen dhaman gobalada jamhuuriyada Somaliland dhalintii shaqo qaran ee ka kala timid.
Imtixaankani waxa uu gaar u ahaa dhalinyarta shaqo qaran Guud ahaan gaar ahaana intii shuruudihii iyo wakhtigii loo Baahnaba Buuxisay.
Tirada rasmiga ee imtixaanka u fadhiisanaysay waxa uu Agaasimaha barnaamijka shaqo Qaran Maxamed Xuseen Cismaan ‘Mu’adin’ ku sheegay inay tahay” 980 tartame oo shaqo qarana”.
Boosaska loo tartamaayay waxa ay hore u ahaayen 400 oo boos dhamantoodna waxay ay gaar u ahaayeen dhalinyarta shaqo qaran mana jirin cid kale oo imtixaanka ka qayb galaysay maadama uu madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland mudane H.E. Muuse Biixi Cabdi uu kooto gaara ugu xidhay fursadaha shaqo iyo deeqaha waxbarashadaba dhalinyarada Barnaamijka shaqo qaran soo marta.
Haddaba waxa jiray tuhuno badan oo isa soo taraayay oo ka gudi ahaan na soo gaadhayay in imtixaankaas aanu gaar u noqon doonin dhalinyarta shaqo qaran ee ay ka qayb qaadan doonaan dad kale oo sifo aan sharci ahayn kaga faa’iidaysan doona fursadan u gaarka ah bahda shaqo qaranta , dadkaas oo imtixaanka ku gali doona magaca shaqo qaran , iyaga oo leh ID cards si gaara loogu sameeyay.
Waxa si xana nagu soo gaadhaysay in dadkan la doonayo inay imtixaanka la galan ardaydii shaqo qaranta ay yihiin dad ka socda dhinaca saamilayda shirkada Singpore New Silk Somaliland oo qayb kamida ay leeyihiin muwaadiniin reer somaliland siiba inanka madaxweynaha Somaliland oo shirkadan saami ku leh.
Waxaa is waydiin leh maxaa hadda loo qarinaya in si daahfuran loo sheego saamiga ay doonayan in ay iyana qaataan oo ka madax banan shaqo qaranta?
Haddii la odhan lahaa 300 waxa gaar u leh ardayda soo dhamaysatay barnaamijka shaqo qaran , 100 na waxa gaar u leh dhalinyarta kale ee somaliland wax dhibaato ah kama taagnaateen lakiin waxa wax laga xumaado ah in la yidhaa deeqdan waxa ay gaar u tahay dhalintii shaqo qaranta haddana dad si hoose loo dhex wado.
Sidoo kale waxa iyana is waydiin leh waa ayo cida gaarka ah ee ay saamilaydani doonayso in ay qaadato?
Maa sida shaqo qaranta oo kale si daahfuran loo soo xeraysto iyada oo ay u siman yihiin dhaman dhalinyarta reer somaliland guud ahaantood!!.
Maxaa daaha dabadiisa loo galinaya oo cid gaara loola doonaya?
Waxan cadaynaynaa in tiradii 400 ee shaqo qaran ay xaq u lahayd inay hesho laga dhigay 300 oo kaliya , sababta looga jaray 100 kaa boosna aan la sheegin.
Waxan kale oon cadaynaynaa in 100 boos cid gaara loo waday oo aan ummada reer somaliland loo soo bandhigin.
Haddaba imtixaanku saaka siduu u qabsoomay?
Inkasta oo aanan ka mid ahayn dadka ka qayb qaadanaayay deeqdan wax barasho haddana maadama oon goob joog u ahaa waxan haynay xogo badan oo xasaasiya kuwas oo ku saabsan cida imtixaankan nala galaysa , cida ay yihiin , cida wadata iyo halka ay imtixaanka ku galayaan.
Inta waxa noo sii dheera kadib markii lasoo dhajiyay tartamayaasha imtixaanka galaysa ayaa waxa yaab iyo fajac nala noqotay in dad badan oon waligood shaqo qaran soo marin ay kaso muuqdeen liisaskii lasoo baahiyay.
Dadkan waxa ay iskugu jireen qaar ay walaalo yihiin dad caana, qaar masuuliyiin wax u yihiin iyo inta u badan oo ragii saamiga lahaa ay wateen.
Anaga oo xogta xasaasiga ah sii hayna ayaa saakana sii xaqiijinay bal si aan war sugan usii helno.
Saaka hiirtii horeba waxanu diyaar kusii ahayn gudidaydii goobti imtixaanka waxa goobti kula kulanay dhalin aan warkoodaba qarsanayn oo aan shaqo iyo shuqul toona usoo marin barnaamijka shaqo qaran!! Yaab badana.
Maanu dag dagine agaasimihii iyo hawl wadeenadi ayaanu ka war sugnay bal sida ay wax u wadaan inay wax iska bedeleen iyo in kale.
Saf balaadhan ayaanu galnay waxaana halka nagula hadlaayay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran waxa uu sheegay ” in barnaamijkan uu gaar u yahay dhalinyarada shaqo qaran ayna tahay fursad iyaga u gaara”. Waxa isku kaaya qaban waayay barnaamijkan in uu dhalinyarada shaqo qaran gaar u yahay haddana ay halkan ( jaamacada dhexdeeda) tuban yihiin dhalinyaro u diyaara inay imtixaanka magaca shaqo qaran ku galaan!!?.
Waxaanu go’aansanay inaanu agaasimaha bal tusno hadaanu ka war qabinba dadkan meesha tuban ee aan shaqo qarana ahayn imtixaankana u diyaara inay magaca shaqo qaran ku galaan.
Waanu u yeedhnay agaasimihi waxanu ku nidhi:-” mudane halkan waxa tuban oo taagan dad magaca shaqo qaran imtixaanka ku galaaya ee bal kaalay soo eeg”.
Wuu naga ajiibay agaasimuhu waanu na soo raacay waxaanu tusnay dhalinyartii xaga sare aan ku sheegnay.
Agaasimuhu wuxu ku yidhi”maxaa tihiin”.
Waxa u jawaabay wiil kaadh dheer qoorta gashana oo la igu yidhi waxa uu kamid yahay shaqaalaha shirkada Singpore New Silk Somaliland Energy ayaa si dhiiranaan leh ugu yidhi ” waxanu nahay dhalinyartii shirkada ka socday”. Agaasimuhu wuu ka dhaqaaqay isaga oo aan juuq u odhan.
Waxan isku daynay inaanu cadaymo ka qaadno dadka magaca shaqo qaranta ku jiray waxaanu ka duubnay dhawr video haddi loo baahdana aanu baahin doono.
Waxa kale oo tuhun kan run kasii dhigay dad badan oo lasii ogaa inaanay shaqo qaran ku jirin oo goobti iska soo xaadiriyay igaya oo qof qof loo garanayo iyo cida wadatayba isla kuwaana cadaymo ayaanu ka reebnay.
Ugu dambayn halka ay sirtu ka qudhuntay waxa weeyi
-magacii shaqo qaran oo cid aan ahayn isticmaalayso kaadhadh iyo cadaymo beenan loo sameeyay.
– in 400 oo boos oo hore dhalinyarada shaqo qaran hore loogu balan qaaday laga jaray 100 boos sababtana aan la sheegin.
– in 100 boos si qarsoodiya loo buuxsanaayo oon ummada reer somaliland lasoo dhex dhigin si si cadaalada loogu tartamo ee cid gaara lagu naas nuujinaayo.
– in aan warbaahintii madaxa banaanayd loo ogalaan inay baahiyaan xaqiiqda ka jirta qaabkii imtixaanku u qabsoomay sababta darteedna dhawr wariye oo arrintan aanu uga waranay loo xidhay loona diiday inay baahiyaan.
Ugu dambayn waxanu cadaynaynaa in imtixaanka qaabkii , qorshihii loo soo agaasimay ay wax badan oo isdaba marini ku jirto.
Qaybta labaad waxa kamid noqon doonta dadkii imtixaanka magaca shaqo qaran ku galaayay oo gawaadhi inta lagu qaaday imtixaanki hotel wayn oo magaalada kamida lagaga qaadayay waliba qado sharafna halkaa loogu sii diyaariyay!!.
Waana halka wariyeyaal badan lagu xidhay.
Lasoco Qaybta labaaad Waxa qoray mid ka mid ah Ardayda shaqo qaran oo goob joog ahaa wixi saaka halkaa ka dhacay
Kana cudur daartay in magaciisa la baahiyo ilaa inta xogtu banaanka imanayso
Tabintii Saxafi Farxaan xaashi cabdilaahi
Soomaali-State Oo Ku Gacansaydhay Digniinta Maraykanka. Xasuuqii Ayshaca August 1960!